Sida loo Beddelaan / Guba VOB in DVD on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan VOB in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Your computer kuu dhaansan yahay, by filimada VOB oo aad rabto in la gubo si DVD? Sida laga soo xigtay baadhitaan ay sameeyeen shirkadda software ah 1000 qof oo ka mid ah, waxaa jira 83% oo ka mid ah waxaan dooran doonaa si loogu badalo VOB in DVD. Waa hagaag, waxaad karaan gurmad oo dhan filimada VOB jecel in ay sii daayaan aad meel disk deegaanka. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa gubi VOB ah: Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ), kaas oo kaa caawin kara inaad badalo oo gubi files VOB in DVD la video tayo wanaagsan leh.
Hagaha hoos ku qaadataa DVD Creator for Windows tusaale ahaan (Windows 10 ka mid ah). Abuuritaanka DVD ka VOB ee Mac (Mountain Libaaxa ka mid ahaa) ku dhowaad waa isku mid. Kaliya u hubso in aad ka hesho version saxda ah.
Free download gubi VOB si ay u abuuraan DVD ka files VOB:
1 Load files VOB
Marka la bilaabay FLV si DVD Converter, hel "Guba" menu> "Add Files" badhanka si ay u dajiyaan FLV video files iyo abaabulo ka kooban DVD. Ka dib markii FLV video files waxaa lagu daray, si fudud u jiidi oo hoos u qabsadaan si video ah.
Haddii aad rabto in aad si loogu badalo VOB in DVD la Cinwaan dibadda, waxaad ku dari kartaa qaabab subtitles:. SRT, dameer oo SSA Si aad u samayn, riix "T" tab hoos macluumaad file ah, ka dibna dooro "Add Cinwaan" in ay ku shuban aad subtitles.
2 Edit VOB videos
Ka hor inta diinta videos FLV in DVD, waa ikhtiyaari in xaalkaa Flash video. Haddii aad rabto, doortaan "Edit" in la furo suuqa kala video tafatir ah. Tiro balaadhan oo ah qalabka tafatirka waxaa lagu dhisay, dalagga, isku shaandheyn, watermark, saamaynta iyo wixii la mid ah.
3 Guba VOB in DVD ama Beddelaan VOB in ISO / DVD Folder
Hadda bedesho "Guba" tab. Hubi DVD disc maran ayaa la geliyo DVD drive aad. Doorasho default waa in la gubi files VOB in DVD. Si kastaba ha ahaatee, waxaad dooran kartaa in la abuuro Folder DVD ama file Image ISO. Goobaha kale ee sida DVD calaamadda, TV Standard, tayada video, iwm sidoo kale la siiyaa, ka dib oo dhan goobaha xuduudaha ay dhammaadaan, Hit ah "Guba" button ee geeska hoose ee saxda ah ee suuqa si uu u sameeyo DVD ka .vob. Wareejinta waxaa ku dhameysan doono waqti gaaban haddii aad videos aan aad u badan tahay. Ka hor inta gubasho, sidoo kale waxa aad ku eegaan kartaa adigoo gujinaya icon Play ah.
Iyadoo VOB Wondershare xirfadeed si DVD gaare (Windows 8 taageeray), aad DVD si fudud u samayn kartaa ka files VOB si aad ku raaxaysan kartaa waqti tayo leh daawashada filimaanta VOB on DVD ciyaaryahan aad qoyskaaga iyo saaxiibadaa ama idinku soo diro cajalladaha iyaga u qaybsiga fiican .
Gubasho VOB inay talooyin DVD:
1. file VOB A waa qaab weel warbaahinta DVD-Video taas oo ka kooban video, audio, Cinwaan, menu iyo navigation ku jira. Waa content ugu weyn ee Folder DVD (VIDEO_TS iyo AUDIO_TS) a. Haddii aad u gubi files VOB in DVD ee Mac, Mac Video Converter Ultimate si toos ah u DVD nuqul ka kartaa Video_TS folder aan kelmadaha kasta, taas oo macnaheedu yahay file DVD Abuuray files VOB aad ee doono isla tayada saxda ah.
2. VOB in DVD gubi sidoo kale waxay bixisaa qaab oo kala duwan oo DVD bedeley. Haddii aad u gudub dooran menu ah DVD aad, software ka dhigi doonaa menu DVD default aad u. Waxaad la shakhsiyeeyo karaa menu DVD ah la beddelo badhannada menu, thumbnails, mab, iwm Ama dooro "Menu No" si ay u gubaan VOB DVD aan bedeley.
Top 10 free Codsiyada gubi Blu-ray
Sida loo Beddelaan Flash FLV Videos in DVDs